पोखरामा घटेन चिसो, आज कहाँ-कहाँ हुन सक्छ वर्षा र हिमपात ? – Gandaki Voice
Home/देश/पोखरामा घटेन चिसो, आज कहाँ-कहाँ हुन सक्छ वर्षा र हिमपात ?
पोखरामा घटेन चिसो, आज कहाँ-कहाँ हुन सक्छ वर्षा र हिमपात ?
हाल देशमा पश्चिमी वायुको प्रभाव रहेको छ जसले देशभर सामान्य बदली रहेको छ । देशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागमा हल्कादेखि मध्यम हिमपात हुनुका साथै सुदूर पश्चिम प्रदेश, कर्णाली प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश, गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागहरुका थोरै स्थानहरु तथा बागमती र प्रदेश नं. १ को भूभागहरुका एक वा दुई स्थानहरुमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ ।
गण्डकी प्रदेशमा दुई दिनदेखि मौसममा परिवर्तन आएको छ । प्रदेश राजधानी पोखरामा आइतबारदेखि बढेको चिसो मंगलबारसम्म पनि घटेको छैन । पानी पर्ने संकेत गरेपछि हुस्सु मात्र लागेको छ । पोखरामा साँझ विहान कडा र हिउँसो हल्का चिसो महसूस भइरहेको छ ।
मंगलबार देशभर सामान्य बदली रहने छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश, कर्णाली प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश, गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागहरुका थोरै स्थानहरु तथा बागमती र प्रदेश नं. १ को भू-भागहरुका एक वा दुई स्थानहरुमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ । साथै देशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागमा भने हल्कादेखि मध्यम हिमपातको समेत सम्भावाना छ ।
बुधबार देशको सुदूरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेशमा सामान्य बदली तथा बाँकी प्रदेशहरुमा आंशिक बदली रहने छ । सुदूर पश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेशका थोरै स्थानहरुमा तथा गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका एक वा दुई स्थानहरुमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ । साथै पश्चिमी उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका केही स्थानहरुमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ ।
बिहीबार देशको पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रहि अन्य भूभागहरुमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ । पश्चिमी हिमाली भूभागका एक दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको मौसम विभागले जनाएको छ ।
शीर्ष स्थानको लिभरपुल पराजित